မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော ရွှေလှေချောင်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းပြီး အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် ချောင်းမှာ ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့နေပြီး ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်တူးဖော်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့် ရွှေလှေချောင်းအား ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသနည်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်း – Yangon Hluttaw
Home / မေးခှနျးမြား / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော ရွှေလှေချောင်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းပြီး အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် ချောင်းမှာ ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့နေပြီး ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်တူးဖော်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့် ရွှေလှေချောင်းအား ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသနည်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော ရွှေလှေချောင်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းပြီး အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် ချောင်းမှာ ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့နေပြီး ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်တူးဖော်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့် ရွှေလှေချောင်းအား ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသနည်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်း
Ygn Editor June 21, 2019	မေးခှနျးမြား 28 Comments 2,130 Views
ရန်ကုန်၊ ဇွန်လ၊ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်လွင်က “မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော ရွှေလှေချောင်းအား ကွန်ကရစ်ခင်းပြီး အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားပါသဖြင့် ချောင်းမှာ ရေစီးရေလာပိတ်ဆို့နေပြီး ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်တူးဖော်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသောကြောင့် ရွှေလှေချောင်းအား ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသနည်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ထားခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း” မေးမြန်းရာ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်စိုးက “ မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မျှမရှိဘဲ တည်ဆောက်မှုကို ၂၀၁၆ မတိုင်ခင်ကတည်းက တည်ဆောက်ပြီးကျူးကျော်ထားပါကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ ရှိသော ရွှေလှေချောင်းသည် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှ စတင်ပြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ကိုဖြတ်သန်းပြီး ငမိုးရိပ်ချောင်းသို့ စီးဝင်သော ချောင်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရွှေလှေချောင်းမှာ ၄၆၅၀ ပေ အရှည်ရှိပြီး ချောင်း၏အထက်ပိုင်း ဖောင်တော်ဦးဘုရားလမ်းမှ ရထားလမ်းထိ အရှည် ၉၀၀ ပေ၊ ချောင်းအကျယ် ၁၄ ပေရှိပြီး ချောင်း၏ အလယ်ပိုင်းရထားလမ်းမှ သုဓမ္မာလမ်းထိ အရှည် ၁၆၅၀ ပေ ချောင်းအကျယ် ၁၆ ပေရှိပြီး ဟိုတယ်ဇုန်အပိုင်း ပေ ၈၀၀ ခန့်မှာ အကျယ် ၉ ပေသို့ ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီး ချောင်း၏ အောက်ပိုင်းသုဓမ္မာလမ်းမှ ငမိုးရိပ်ချောင်းအထိ အရှည် ၂၁၁၀ ပေ ၁၅ ပေခန့်ရှိပါကြောင်း၊ ရွှေလှေချောင်း စီးဆင်းရာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (ဃ) ရပ်ကွက်အတွင်း၌ ချောင်းအကျယ်သည် ၉ ပေခန့်သာရှိ၍ ၎င်းရပ်ကွက်အတွင်းရှိ High Five Hotel , Hi Star Hotel ၊ ကျောက်စိမ်းဟိုတယ်၊ ချမ်းမြေ့ဟိုတယ် စသည့်ဟိုတယ်များသည် ၎င်းတို့၏ အရှေ့ ရွှေလှေချောင်းပေါ် ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ကွန်ကရိအခိုင်အမာခင်း၍ ကားပါကင်ဖြင့် အသုံးချခြင်းတို့ကြောင့် ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဟိုတယ်များမှ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောင်ရွက် ထားမှုအား ရွှေလှေချောင်း၏ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရန်အတွက် လူအင်အား၊ စက်အင်အားဖြင့် ရှင်းလင်းဆောင်ရွက် ရာတွင် အခက်အခဲများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရွှေလှေချောင်းများပေါ်၌ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ ဖြစ်သော Sky KTV နှင့်ကျောက်စိမ်းဟိုတယ်မှ ဆောင်ရွက်ထားသည့်(၁၇၀ ပေ× ၉ ပေ) Car Parking၊ ကျောက်စိမ်းဟိုတယ် ကွန်ကရိကြောငြာမြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ် (၅ ပေ × ၆ ပေ) ၁ ခု၊ High Five Hotel မှ (၁၁၉ ပေ × ၉ ပေ) Car Parking၊ ချောင်းအပေါ် ကန့်လန့်ထားသည့် မီးစက် (၁)လုံးထားရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး ၎င်းတို့ကို (၂၆.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပြန်လည်ဖယ်ရှားဖျက်သိမ်းပေးရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက စည်ပင်သာယာတည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်များထံ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ လက်ရှိအခြေအနေအရ မြို့နယ်ရုံးတွင် ဖျက်သိမ်းရန် ကတိခံဝန်ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ဖျက်သိမ်းရန် မြောင်းသာကျန်ရှိပါကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်စွဲအတိုင်း ဖျက်သိမ်းရန်အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်၍ မဖျက်သိမ်းပါက တရားစွဲဆိုအရေးယူသွားရန် အစီစဉ်ရှိပါကြောင်း၊ ” ပြန်လည်ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။
ရနျကုနျ၊ ဇှနျလ၊ ၁၈ ရကျ၊ ၂၀၁၉ ဒုတိယအကွိမျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော နဝမပုံမှနျအစညျးအဝေး ဒုတိယနတှေ့ငျ မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးမွငျ့လှငျက “မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျမှ ဖွတျသနျးစီးဆငျးသော ရှလှေခြေောငျးအား ကှနျကရဈခငျးပွီး အခိုငျအမာ တညျဆောကျထားပါသဖွငျ့ ခြောငျးမှာ ရစေီးရလောပိတျဆို့နပွေီး ရစေီးရလောကောငျးမှနျစရေနျ ပွုပွငျတူးဖျောရာတှငျ အခကျအခဲဖွဈနပေါသောကွောငျ့ ရှလှေခြေောငျးအား ထိုကဲ့သို့ ဆောငျရှကျထားခွငျးကို မညျသညျ့ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ ဆောငျရှကျထားရှိပါသနညျး၊ ထိုသို့ဆောငျရှကျထားခွငျးကို မညျကဲ့သို့ အရေးယူဆောငျရှကျမညျကို သိရှိလိုပါကွောငျး” မေးမွနျးရာ စညျပငျသာယာရေးဝနျကွီး ဦးမောငျမောငျစိုးက “ မေးခှနျးနှငျ့စပျလဉျြး၍ မညျသညျ့ခှငျ့ပွုခကျြမြှမရှိဘဲ တညျဆောကျမှုကို ၂၀၁၆ မတိုငျခငျကတညျးက တညျဆောကျပွီးကြူးကြျောထားပါကွောငျး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ၌ ရှိသော ရှလှေခြေောငျးသညျ မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျမှ စတငျပွီး မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျကိုဖွတျသနျးပွီး ငမိုးရိပျခြောငျးသို့ စီးဝငျသော ခြောငျးမကွီးတဈခုဖွဈပါကွောငျး၊ ရှလှေခြေောငျးမှာ ၄၆၅၀ ပေ အရှညျရှိပွီး ခြောငျး၏အထကျပိုငျး ဖောငျတျောဦးဘုရားလမျးမှ ရထားလမျးထိ အရှညျ ၉၀၀ ပေ၊ ခြောငျးအကယျြ ၁၄ ပရှေိပွီး ခြောငျး၏ အလယျပိုငျးရထားလမျးမှ သုဓမ်မာလမျးထိ အရှညျ ၁၆၅၀ ပေ ခြောငျးအကယျြ ၁၆ ပရှေိပွီး ဟိုတယျဇုနျအပိုငျး ပေ ၈၀၀ ခနျ့မှာ အကယျြ ၉ ပသေို့ ကဉျြးမွောငျးသှားပွီး ခြောငျး၏ အောကျပိုငျးသုဓမ်မာလမျးမှ ငမိုးရိပျခြောငျးအထိ အရှညျ ၂၁၁၀ ပေ ၁၅ ပခေနျ့ရှိပါကွောငျး၊ ရှလှေခြေောငျး စီးဆငျးရာ မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ၊ (ဃ) ရပျကှကျအတှငျး၌ ခြောငျးအကယျြသညျ ၉ ပခေနျ့သာရှိ၍ ၎င်းငျးရပျကှကျအတှငျးရှိ High Five Hotel , Hi Star Hotel ၊ ကြောကျစိမျးဟိုတယျ၊ ခမျြးမွဟေို့တယျ စသညျ့ဟိုတယျမြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ အရှေ့ ရှလှေခြေောငျးပျေါ ခှငျ့ပွုခကျြမဲ့ ကှနျကရိအခိုငျအမာခငျး၍ ကားပါကငျဖွငျ့ အသုံးခခြွငျးတို့ကွောငျ့ ရစေီးရလော ကောငျးမှနျရေးဆောငျရှကျရာတှငျ အနှောကျအယှကျဖွဈပါကွောငျး၊ ထိုသို့ဟိုတယျမြားမှ ခှငျ့ပွုခကျြမဲ့ဆောငျရှကျ ထားမှုအား ရှလှေခြေောငျး၏ ရစေီးရလောကောငျးမှနျရနျအတှကျ လူအငျအား၊ စကျအငျအားဖွငျ့ ရှငျးလငျးဆောငျရှကျ ရာတှငျ အခကျအခဲမြားမဖွဈပျေါစရေနျအတှကျ ရှလှေခြေောငျးမြားပျေါ၌ ခှငျ့ပွုခကျြမဲ့ ဆောငျရှကျထားရှိမှုမြား ဖွဈသော Sky KTV နှငျ့ကြောကျစိမျးဟိုတယျမှ ဆောငျရှကျထားသညျ့(၁၇၀ ပေ× ၉ ပေ) Car Parking၊ ကြောကျစိမျးဟိုတယျ ကှနျကရိကွောငွာမွစေိုကျဆိုငျးဘုတျ (၅ ပေ × ၆ ပေ) ၁ ခု၊ High Five Hotel မှ (၁၁၉ ပေ × ၉ ပေ) Car Parking၊ ခြောငျးအပျေါ ကနျ့လနျ့ထားသညျ့ မီးစကျ (၁)လုံးထားရှိကွောငျး တှရှေိ့ရပွီး ၎င်းငျးတို့ကို (၂၆.၂.၂၀၁၉) ရကျနေ့ နောကျဆုံးထား၍ ပွနျလညျဖယျရှားဖကျြသိမျးပေးရနျနှငျ့ လိုကျနာဆောငျရှကျခွငျးမရှိပါက စညျပငျသာယာတညျဆဲ ဥပဒမြေားနှငျ့အညီ အရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သကျဆိုငျရာ ဟိုတယျပိုငျရှငျမြားထံ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးမှ အကွောငျးကွားပွီး ဖွဈပါကွောငျး ၊ လကျရှိအခွအေနအေရ မွို့နယျရုံးတှငျ ဖကျြသိမျးရနျ ကတိခံဝနျဖွငျ့ အကွောငျးကွားပွီးဖွဈပါကွောငျး၊ဖကျြသိမျးရနျ မွောငျးသာကနျြရှိပါကွောငျး၊ သတျမှတျထားသညျ့ ရကျစှဲအတိုငျး ဖကျြသိမျးရနျအကွောငျးကွားထားပွီး ဖွဈ၍ မဖကျြသိမျးပါက တရားစှဲဆိုအရေးယူသှားရနျ အစီစဉျရှိပါကွောငျး၊ ” ပွနျလညျဖွကွေား ခဲ့ပါသညျ။
Previous ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ကျင်းပ
Next နောက်ဆုံးတိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သော တရားရုံးသက်သေစရိတ်နှင့် သက်သေစရိတ်ထုတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် ချောမွေ့စေရန်တရားရုံး၏ ထင်သာမြင်သာသော နေရာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ တရားရုံးများအတွက် လိုအပ်သော သက်သေစရိတ်ကို စနစ်တကျ ဘတ်ဂျက်ချမှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ မေးမြန်း
HEvwVR http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
some intimate moments with each other. This article looks at some of their more questionable activities.
for me to payavisit this website, it includes important
I goo to see every day some blogs and websites to read articles, but this website
provides feature baserd posts.
GWuWHp https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
qlzUYo http://xnxx.in.net/ xnxx videos